पहिले देश परिवर्तनको लागि लडे ,अब यो क्षेत्रको विकास र अधिकारको लागि लडछु : लेख राज भट्ट - Everest Dainik - News from Nepal
पहिले देश परिवर्तनको लागि लडे ,अब यो क्षेत्रको विकास र अधिकारको लागि लडछु : लेख राज भट्ट
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमा नै सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत हिमाली र
उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा गएको मंसिर १० मतदान सम्पन्न भईसकेको छ ।
आगामी मंसिर २१ गते दोश्रो चरणको मतदान हुदैछ । यतिबेला राजनैतिक दल र दलका नेताहरु मतदाता आफना पक्षमा पार्नका लागि सक्रियरुपमा लागेका छन् । कैलाली क्षेत्र नं ४ मा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । कैलाली क्षेत्र नं ४ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी नेता लेखराज भट्टसँग लक्ष्मण गौतम र गोविन्द रोस्याराले गरेको कुराकानी ।
वाम गठबन्धनका तर्फ बाट यस पटक पनि तपाईको उम्मेदवारी कैलाली क्षेत्र नं ४ मा प्रतिनिधी सभाका लागि भएको छ, तपाईको उम्मेदवारी केका लागी ?
मेरो उम्मेदवारी भनेको यस क्षेत्रको विकासका लागी हो, त्यसका अलावा खासगरि ६२/६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सिद्धान्त जो स्थापित ग¥यौ र अबको आर्थिक सम्बृद्धि र विकासको निमित्त मेरो उम्मेदवारी हो । विशेष गरी अहिलेको २०७२ को संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र अब आर्थिक सम्बृद्धि र विकासतिर देशलाई लैजानलाई नै हो ।
खासगरेर अहिले दुई पक्ष लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन बीच प्रतिष्पर्धा भएको छ । जस्मा तपाईको प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुनिल भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मत नदिएर तपाईलाई मत किन ?
अब सुनिल भण्डारीलाई मत दिनु भन्ने पनि कारण छैन, म किनभने यहाँको स्थानीय पनि हो । जे भूमिका यो देशको परिवर्तनको लागि मैले गरे यो क्षेत्रको विकास र अधिकारको निमित्त म जसरी लडें त्यसका निमित्त मलाई यहाँका सचेत जनताहरुले मत दिन्छन भन्ने विश्वास छ र म जहिले पनि यो क्षेत्रको विकासको निमित्त, अधिकारको निमित्त लडिरहेको मान्छे हो र मैले पूर्णतः आफ्नो जिवन सर्मपण यसैको लागि गरे र सुनिल भण्डारी सायद उनले यो क्षेत्रलाई बुझेका पनि छैनन भन्ने लाग्छ ।
पटक–पटक यहाँका मतदाताहरुले तपाईलाई माया गरे कै हुन । यो भन्दा अघिल्लो पटक पनि तपाईलाई निर्वाचित गराई सकेर मन्त्री पनि बन्नु भयो । लेखराजले हामीले सोचेजस्तो काम गर्दिएन भन्ने स्थानीयको गुनासो छ नी ?
गरेका कामहरु जनताका बीचमा मैले लैजान नसक्नु नै मेरो कमजोरी रह्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरिम संसदमा सांसद भईसकेपछि सेती लोकमार्ग, खटिया–दिपायल दुर्त मार्गको योजना अनि मेडिकल कलेज, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यायल, सुख्खा बन्दरगाह जो दिर्घकालिन रुपमा अब प्रतिफल दिन्छन् । यी कुरा विकासका कुरालाई बुझाउन सकिएन । यो मैले गरेका कुरा हुन र पछिल्लो चरणमा पश्चिम सेती परियोजना जब नबन्ने भईसकेपछि पछिल्लो उर्जामन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी र मेरो पहलले थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भयो र पश्चिम सेती बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी पञ्चेश्वरलाई हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गएका थियौँ र त्यो जहिले पनि अवरोध भाथ्यो र भारतले पनि त्यसलाई बनाउने कुरामा त्यति अग्रसर देखिदैनथ्यो । पछिल्लो चरणमा मैले आफै अध्ययन गरेर त्यो क्षेत्रमा पैदलै हिड्याछु, त्यसका सम्झौताहरु, सर्तहरु जम्मै अध्ययन गरिसकेपछि यो त हाम्रो राष्ट्रघाती हैन है पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना नेपालकै पक्षमा, हितमा छ भनेर जसरी मैले क्याम्पीयन गरे र हाम्रो नेतृत्वको सरकार भैसकेपछि ति चिजहरु अगाडि बढे । यो क्षेत्रमा भएका, गरेका कामहरु जो कांग्रेसले गर्न नसकेका कुराहरु मैले छोटो समयमा नै गरेको छ । र त्यो भएर सानातिना कल्भर्ट, ग्राभिल ईत्यादीमा जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सकिएन यो कुरा सत्य हो र अब त्यो गर्ने अवसर आउदैछ ।
याे पनि पढ्नुस मृतक निर्मलादेखि शहीद खुना र घाइतेकाे घरमा लेखराज भट्ट (फाेटाेफिचर)
तपाईले आफ्नो घोषणापत्रमा खास गरेर सात नम्बर प्रदेश र यो कैलालीको चार नम्बर क्षेत्रभित्र महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नु भएको छ, के सम्भव छन ति सबै कुरा ?
कुनैपनि चिज असम्भव भन्ने हुँदैन । र असम्भव भन्ने कुरा मेरो डिस्नरीमा पनि छैन । हिजो असम्भव भन्ने कुराहरु सम्भव बनाएका छौ । त्यै भएर अहिले कुनै महत्वकांक्षा नराखिकन हामी अघि बढ्न सक्दैनौ । कार्यक्रमहरु केही महत्वकांक्षी छन तर पूरै गर्न नसक्ने चाहीँ छैनन् । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत–साधनहरु कसरी जुटाउने भन्ने त्यो नेतृत्वको नीतिमा निर्भर गर्छ । र भोली नीति निर्माण गरिसकेपछि ति योजनाहरु सहज रुपमा कार्यान्वयनमा जान सक्छन र जान्छन ।
चुनाव प्रचारका क्रममा तपाइ ४ नं क्षेत्रका सबै स्थानमा पुग्नु भएको छ । आम मतदाताको चाहना के छ, उनीहरु के भन्छन ?
अब आम मतदाताको पहिलो कुरा के छ भने ग्रामीण सडकहरुलाई ग्राभिल गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थीत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने त्यसपछि दोस्रो खानेपानीको समस्या दर्साउछन, तेस्रो कुरा स्कुलमा दरबन्दी र भवनहरु लगायतका स्कुलका समस्या । चौथो नम्बरमा स्वास्थ्यको समस्या देखाउछन । पाचौं नम्बरमा जहाँ बिजुली पुगेको छैन, भोल्टेज पुगेको छैन त्यसलाई व्यवस्थीत गर्ने कुरा । यी महत्वपूर्ण कुराहरु आछन र किसानहरुको अर्को कुरा के छ भने मल बिऊ समयमा पाईएन, यसलाई व्यवस्थीत गर्नु पर्यो र समयमा किसानले मल बिऊ पाउने र त्यसपछि त्यसको उत्पपादनहरुको उचित मुल्य समयमै सरकारले तोक्नु पर्ने । र सरकारले दिएको अनुदान आम किसाानसम्म पुग्न सकेको छैन त्यसलाई कसरी नीतिगत रुपमा वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा जनताले उठाएका छन् ।
खास गरेर ४ नम्बर क्षेत्रका तराई र पहाडी बेल्टका फरक–फरक समस्या छन । जस्तो माथि फुल्बस्ती बन्नेगडा, हाटखोली लगायतका मानिसहरु अहिले पनि खोलाको दुषित पानी पिउन बाध्य छन भने तलको समस्या फरक छ । आम रुपमा केहि मतदाताहरु हामीले किन भोट हाल्ने अहिलेसम्म हामीले भोट हालेर धेरै पटक जितायौ, हामीलाई त्यस्तो कुनै खालको सहयोग नै भएन भन्ने खालको गुनासो गरी राख्नु भएको छ के भन्नु हुन्छ ?
मैले धेरै चोटी होइन २०६४ सालमा एक चोटी जितेको हुँ । तर पनि जित हारसगँ मेरो कुनै सरोकारको विषय हैन । मैले पछिल्लो चरणमा धेरै काम गरे जनताका निमित्त र उहाँहरु निराश हुनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता म देख्दिन । र त्यहाँसम्म बाटो पुर्याउने कुरा र अझ चुरेको त मैले देखेको कुरा के हो भने व्यवस्थीत बस्ती बसाल्ने कुरा । त्यसलाई चाहीँ संरक्षण गर्ने कुरो । तल चाहीँ स्वच्छ खानेपानीको समस्या र व्यवस्थापन गर्ने कुरा । तल्लो बेल्टको पानीमा पनि आरसेनिक र चुनको मात्रा बढी छ । त्यसलाई हामीले कसरी स्वच्छ पानी जनतासम्म पुर्याउन सक्छौ त्यो बृहत योजना बनाएर जाने कुरो नै हो ।
याे पनि पढ्नुस कैलालीबाट ठूलो परिमाणमा बाघ र चितुवाको छाला बरामत
यो क्षेत्रको तपाई आशा गरिएको उम्मेदवार हो । तपाईले निर्वाचनमा निर्वाचित भईसक्नु भयो भनेपछि तपाईले सर्वप्रथम गर्ने चार वटा कामहरु केके हुन्छ्न बताईदिनु होस न ?
पहिलो कुरा त हाम्रो यहाँ जुन अघि नै भने किसानहरुको मलबिऊका समस्याहरु छन त्यसलाई कसरी व्यवस्थीत गर्ने त्यसै गरी तपाईको खानेपानीका समस्या, स्वास्थ्यको अनि शिक्षाका समस्या जे छन तिनलाई व्यवस्थीत र जुन अहिले मैले भने सेती सडक भो लोकमार्ग भो त्यसैगरी खटिया–दिपायल सडक त्यसैगरी महाकाली लोकमार्ग लगायतका योजनाहरु मेडिकल कलेज, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थीत गर्ने र दुर्त रुपमा तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरो महत्वपूर्ण हो । पछिल्लो चरणमा मैले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा हो । के हो भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत १५ वटा आंगीक क्याम्पसहरु पनि पाएका छन ६ वटा आंगीक मा जाने छन । त्यो भएर मैले प्राथमिक रुपमा यहाँका जो जनजीविका सँग जोडिएका कुराहरु छन दैनिक जीवनसँग त्यो चाहीँ मेरो प्राथमिकता हुन्छ । अर्को यो सिंचाई जस्तो तपाईको ४ नम्बर क्षेत्रमा मोहना सिँचाई योजना, त्यसैगरी खुटिया सिँचाई योजना र उता तपाईको कांगा र यता यो खुरखुरे सिंचाई योजनाहरुलाई दुर्त रुपमा काममा लाएर फेरि हामी अघि बढ्ने कुरो नै हुन्छ ।
खास गरेर अहिले तपाईलाई विकासकै लागि चुनाव जिताउनुपर्छ भन्ने नै हो । खासमा तपाईले गरेका काम केके हुन ?
मैले हेर्दाखेरी ३० वर्ष पञ्चायत कालले लियो र २००७ सालदेखि यता हेर्दाखेरि अझ तपाईको २०४६ पछि २४ वर्ष कांग्रेसले सरकार चलाएको देखिन्छ । र यो क्षेत्रमा के कति विकास भयो यहाँका सबै जनताले बुझेका छन । र म त निश्चित अवधि तपाईको हामी चार वर्षमा त एमाले अहिलेको वामगठबन्धनसहित चार वर्ष हामीले सरकार चलायौ र त्यो बीचमा तपाईले अहिले हेर्न सक्नु हुन्छ । के कति विकास भाका छन । मैले अघि पनि जनाए । मैले गरेका कामहरु पहिलो सबभन्दा महत्वपुर्ण जो देशलाई नै फाईदा हुने कुरा हो । यो सुख्खा बन्दरगाह जो कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा त्यो योजना मैले नै पहल गरेको हो मैले ल्याएको कुरा हो । शिलान्यास कोले गर्छ भन्ने कुरा त्यो महत्वपूर्ण हैन । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला घोषणा भएको थियो र घोषणा गराईयो । यो मेडिकल कलेज जुन छ त्यो मैले नै पहल गरेर ल्याएको हो । यो शंकरचार्यको उ भैसकेपछि त्यो बन चाही जो अहिले मेडिकल कलेजको नाममा आको छ त्यो सामुदायिक बनलाई बन मन्त्रालय ले दिईसकेको, हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । त्यसैगरी यो खुटिया–दिपायल दुर्त मार्ग, सेती लोकमार्ग र पञ्चेश्वरलाई बनाउनु पर्छ भनेर पहल गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो मेरो । र पछिल्लो चरणमा पश्चिम सेती परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा मैले नै विशेष पहल गरेर त्यो थ्री गर्जेजसँग निर्णय गराएको थिए । यी महत्वपूर्ण कुरा ह्ु’न अरु सानातिना त थुप्रै काम गरियो त्यो धेरै गन्न सकिने कुरा पनि छैन ।
याे पनि पढ्नुस डा आरजु र नारदमुनिलार्इ कडा टक्कर दिदै विवेकशील साझाका भण्डारी
तपाईले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेर आउनु भएको नेता ७ नम्बर प्रदेशबाट, वामगठबन्धन चुनावको लागि मात्रै हो भन्नेहरुका लागि तपाई के भन्नु हुन्छ ?
अब यो आ–आफ्नो बुझाई हुन । मैले बुझे सम्म के हो भने अहिले हामी अब यो प’जिँवादी क्रान्ती सम्पन्न ग¥यौ । र अब चाही के हो भने अगाडी बढ्ने हो आर्थिक सम्वृद्धि र विकाश गर्न बामहरु एउटै ठाउमा नभईकन एउटै पार्टि नभईकन त्यो सम्भव छैन । त्यो भएर यो चाही के चुनाव सम्म मात्र सिमित हैन कि अगाडी जान्छ यस्ले पार्टि एकिकरण गर्छ र त्यसपछि यो बामगठबन्धनको जुन बहुमत सरकार बन्छ । त्यसको आर्थिक सम्वृद्धिमा यस्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै यसले भोली यो नेपाललाई विश्वको आर्थिक सम्वृद्धि मुलुकको रुपमा रुपान्तरण गर्छ । त्यो भएर केहि मान्छेहरुका हिजोका राजनितिहरुलाई बुझ्ने र सोच्ने तरीकामा अन्तर नआएको ले उसले यो दुरग्मी महत्वललाई बुझ्न् सक्दैन । त्यो भएर मलाई लाग्छ यो बामगठबन्धन अब पार्टी एकिकरणतिर चुनाव पछि जान्छ ।
अन्त्य आम रुपमा यस क्षेत्रका मतदाताहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
मैले यहाँ एतिहास चाहीँ जनताले निर्माण गर्ने हो । सचेत जनताले नै ईतिहासलाई निर्माण गर्न सक्छ । त्यहि भएर यहाका मतदाताहरुसगँ मेरो अपिल के छ भने यो क्षेत्रको विकाशको लागी म चाही जो ले यहाको परिवर्तन चाहन्छ, विकाश चाहन्छ, यो क्षेत्रको यो प्रदेशको आर्थिक सम्वृद्धि चाहन्छ त्योलाई चाही ती मतदाताहरुलाई मैले आम अपिल के गर्न चाहन्छ’ भने यो चाही अरुले हैन मैले दिन सक्छ’ यो क्षेत्रमा । त्यसैले बामगठबन्धनको म साझा उम्मेदवार भएकोले हाम्रा साझा उम्मेवारलाई अत्याधिक बहुमत दिएर जिताउन अपिल गर्द छु जस्ले यो देशलाई नै अर्को ठाउँमा लग्नेछ । र अन्तमा मेरा कुरा राख्न स्थान दिनु भएकोमा तपाई लाई र तपाईको संचार माध्यम लाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
ट्याग्स: kailali, Lekha Raj Bhatt